Yakanakisa CHEMIKECHI ANCHOR Mugadziri uye Fekitori | Jinggong
Saizi Yechidzidzi Hole Kudzika Dhonza Mutoro (kgs)
Chemikemikari chinotsigisa iri mhando nyowani yechitsigiso bhaudhi iyo ine mishonga yemakemikari
nesimbi yesimbi. Zvigadzirwa zvinogona kushandiswa kumachira emaketeni masisitimu ekugadzirisa, michina uye kuisirwa kwemidziyo, giraidhi yekumisikidza mugwagwa mukuru uye zambuko, uye kuiswa kwezvivakwa zvesimbi, windows uye zvichingodaro.
TH kemikari anchor inozivikanwa inozivikanwa muChina. Iine 'mhando yepamusoro, uye inodhura, anchor, mumakumi maviri emakore apfuura, yakagamuchirwa kubva kune vese vashandisi vedu. Uye isu tine anopfuura 50agents mumusika weChina, unozovimbisa vashandisi kuwana mabasa akanaka.
Nei Uchifanira Kuashandisa
Chemical inonamira inzira yekumisikidza kukongiri uye yakafanana substrates iyo inopa kumwe kuchinjika pane kungoita zvemishini.
Chimbo chinogadzira, senge chinotsigisa ruoko, Dynabolt®, wedge anchor kana kudonhedza-mukati anchor, inoiswa mukongiri uye inowedzera pakuomesa. Kuwedzera uku kunokonzera kuti anchor ibate madziro egomba uye igopa chakasimba kwazvo. Ipo ichi chiri sarudzo inozivikanwa kwazvo uye ine hupfumi, pane, zvisinei, zvimwe zvisingakwanisike.
Saka, chii chiri mukana wemakemikari chinotsigisa? Nekemikari inonamira, resin inorowa mugomba isati yaiswa iyo stud. Naizvozvi, kemikari inowanzo zadza mune zvisakanaka zvese uye nekudaro inoita kuti gomba ridzivirire uye humbowo hwemvura, iine 100% kunamatira.
Uye nemaanchange echimakanika, saizi yega yega yakatemerwa-kureba (kumisikidza) uye dhayamita-ine yayo yekuremerwa inokwanisa. Chemical anchor ane risingaperi embedment kudzika, saka iwe unogona kupinza chero hurefu hwetanda mugomba kuti uwedzere mutoro unorema. Uye kana iwe ukasarudza kushandisa hombe-dhayamita gomba netambo gobvu, unowedzera mutoro unokwanisa zvakare.
Zvese zviri mumabhokisi madiki akasimba uye nebwe zvicharongedzwa zvakasiyana.
Pashure: WEDGE ANCHOR (KUPFUURA BOLT)
Zvadaro: KWENGUVA refu NUT
Stainless Simbi Kemikari Anchor